Sary an-tsary nomerika an'i Tithi Luadthong | Famoronana an-tserasera
Amin'ity ririnina malefaka lalovantsika ity ary toa tsy tonga ny hatsiaka toy ny nitranga tamin'ny taona hafa, raha te hahatsapa izany isika dia hanana lohataona miaraka amin'ny fiovan'ny taonina amin'ny endrika most idyllic of our country. Na dia efa any amin'ny faritra sasany aza dia ahitanao ireo loko mazava sy mazava kokoa mipoitra.
Ho an'ity indrindra dia manana mpanakanto iray isika izay mampiasa sary hosodoko nomerika ho fitaovana iray afindra ireo loko mazava rehetra ireo ary sary izay feno fiainana sy hafanam-po. Azontsika atao koa ny milaza fa manana nostalgia kely ho an'ny anarany izy tenany sy ny dikan'ny hazo, mihoatra noho ireo izay nandalo io toerana io.
Tithi Luadthong no mpanao sary nomerika izay mitondra antsika asa izay filentehan'ny masoandro amin'ny olon-drehetra ireo voasary, loko eto an-tany ary ny fomba fijery izay azon'i manga, napetrak'izy ireo teo alohan'ny tononkalo iray saika miloko miaraka amin'ilay mazoto mandinika io hazo io izay mijoro eo amin'ny sehatra rehetra eo alohany.
Asa an-tsary toa izany dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny sasany amin'ireo hira nostalgika an'ny vondrona anglisy Radiohead ary izany ao amin'ny Hira Piramida angamba ilay artista dia nahita ampahany tamin'ny sora-tanany mba hanehoany amin'ny sary ireo loko mazava rehetra asehony amin'ity sary nomerika ity.
Ny fihetseham-po mahery vaika dia avy amin'ity asa Luadthong ity ary azonao atao izany manolora fanampiana avy amin'ny tranokalanao en Shutterstock, raha afaka miditra ianao ny galerianao hahitana bebe kokoa ny sangan'asany izay manaraka ny tsipika kalitao mitovy sy ny fikatsahana fihetseham-po sy fihetsem-po izay mampita zavatra betsaka amin'ny mpijery.
Asa izay akaiky ny azy Yanjun cheng, izay noresahintsika tamin'ny fiandohan'ny taona tamin'ny ny kalitaony amin'ny loko ary hazavana maizina mba hampisehoana ny fahaizanao sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Ny fianakaviako manontolo dia teto" avy amin'i Tithi Luadthong